imisebenzi zokushisela ukubandakanya anhlobonhlobo imisebenzi ezidinga ukusetshenziswa imishini ezahlukene kanye okudlekayo. Ngakho, ehlukene, futhi ngezinga lobunzima imisebenzi Welding. Kunezinhlobo eziningana abasebenzi kule iphrofayli, kodwa ezimweni eziningi, lunqume ekuhloleni izinga lokuqeqeshwa iba NAKS izitifiketi welders, khona okungase kubonakale njengendlela uhlobo amalayisense. Ukudlula isitifiketi kulesi simiso kusho abasebenzi ukuqeqeshwa, kanye ukuqinisekiswa amakhono akhe nolwazi.
Kungani ngidinga isitifiketi NAKS?
Izinzuzo khona lesi sitifiketi ingabukwa kusuka zombili. Besuka komunye umbono, kuyafaneleka lesinqumo esisemthethweni UWelder ukusebenza ezintweni amela izinga elikhuphukayo ingozi. Ngokwesibonelo, ukusebenza amaphayiphi egesi Ochwepheshe nge isitifiketi NAKS kuvunyelwe kuphela. Iphuzu lesibili lisuselwa kuqala. Iqiniso ukuthi isitifiketi UWelder namanje akuyona kuphela theory kodwa futhi yafakazela ukuthi umsebenzi ujwayelene imisebenzi imithetho ezibekwe NAKS uhlelo. Okungukuthi ngoba welders ngomsebenzi ephansi lomuntu onolwazi ezingeni enjalo ayitholakali ngenxa yokuntula ulwazi. Ngokuvamile, ngaphambi kokuthola isitifiketi, abafaka aqeqeshwe ngokwenele bese wamukela idokhumenti esivula ukufinyelela zabo ukuba zisebenzele izinto eziyinkimbinkimbi - ngokulandelana, kukhuphuke nenkokhelo.
Izinzuzo yisitifiketi sokubhalisa zihlanganisa yokuthi khona imfundo lobuchwepheshe, ulwazi olwanele namakhono angabenza cishe kunoma iyiphi UWelder. Nokho, ukukhipha isitifiketi ngeke zisebenze ngaphandle madokumende alandelayo:
2 izithombe umfakisicelo sokuthola ilayisensi NAKS 3x4 format.
Ikhophi isitifiketi noma idiploma iziqu.
Isitifiketi umsebenzi isipiliyoni.
Uma kungekho i-diploma ye imfundo, isidingo ikhophi yaleli idokhumenti onguchwepheshe amakhono zokushisela.
Amakhophi yezifiso, okuyinto eyaqoqwa ngesisekelo ukuhlola ukuphepha RTN.
Kufanele kuqashelwe ukuthi izidingo ohlwini kwemibhalo ingase yehluke kuye ngesistimu ezingeni lapho isitifiketi nalehleliwe welders futhi mhlawumbe imishini yayo. Zikhona amazinga eziningana ukuzicabangela ngokwehlukile.
Ukuqinisekisa ezingeni lokuqala libhekisela izisebenzi ngithunyelwa ukuyosebenza inotiyela futhi Welding imisebenzi. Lokhu kungaba ngesandla, noma ungeke ukuphatse Welding othomathikhi nge encibilika ubuchwepheshe. Kubalulekile wazi ukuthi ukukhiqizwa kuleli cala yaqaphela ku izinto kulawulwa Rostekhnadzor. Izinga lesibili akuyona kuhlobane ngokuqondile welders. izinduna yakhe pass, nabakhandi, abanye ngubani ahlele aphinde ukugada abasebenzi. Izinga lesithathu lisikisela ukuthi isikhungo welders isitifiketi ngeke ilayisense abaphathi emsebenzini, okungabandakanya izinhloko zeminyango, imikhakha, laboratories, amahhovisi kanye neminye iminyango namaqembu omsebenzi wakhe ehlangene ukusebenza imisebenzi Welding kumasayithi enobungozi. Wokugcina, ezingeni lesine kuhilela isitifiketi yamaqembu amaqembu welders ukuphathwa ngaphakathi lonke ibhizinisi, okuyinto sihlanganisa i-Office of Rostekhnadzor.
Certification wenziwa izikhungo ekhethekile kufakwe NAKS lokubhalisa. Ulwazi eliphakeme kwenziwa ngendlela luhlolo okusebenzayo kanye theory. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi imithetho welders isitifiketi ivumela ukudlula ukuhlolwa kabusha luhlolo kuphela ngemva kwezinsuku ezingu-30. Lokho, uma ukuhlola kuqala esisebenzayo amakhono aluzange luphumelele, le UWelder kuyodingeka ukuqeqeshwa ngokwengeziwe futhi kabusha ukuhlola amandla ayo ukuze ngenyanga.
Uma eqinisekisiwe umuntu abaphezulu, kungenzeka ukuhlola eyinkimbinkimbi luhlolo. Ikakhulukazi, izisebenzi kanye nochwepheshe enifeza wokuhlola lobuchwepheshe kufanele athathe ukuhlolwa ukusebenza polymer izinto. By the way, imithetho izitifiketi welders zisikisela ukuthi ngesikhathi umsebenzi ilayisensi uma zabo zokugcina ezingu-2 edlule, kuyilapho abaholi Unelungelo zisebenzisa idokhumenti iminyaka 5.
Kanye amazinga, kunezinhlobo ezahlukene isitifiketi - ikakhulukazi, eyinhloko elingalodwa, gqwa, futhi extra okungavamile. Uma isisebenzi babengakaze babe ukubhekana imisebenzi professional zokukhiqiza kule ndawo, kuyoba isheke eyinhloko. Ngaphezu kwalokho, ukwandisa isikhathi kwelayisensi, kwenziwa ngezikhathi ezithile UWelder isitifiketi ngefomethi efanayo ngesikhathi esidlule.
Kwenzeka ukuthi i-ubungoti alinikezi ikhono ukusebenza lunye professional ethile. Kulokhu, i isitifiketi ezengeziwe ayezosenza izisebenzi zale nkampani ukuqinisekisa ulwazi lwabo a isiqondiso esithile. Futhi efana uhlobo lokuvivinywa 'eyasetshenziswa endabeni abasebenzi isikhathi eside (izinyanga ezingaphezu kuka 6) akazange iqhaza nokusebenza ukusebenza. Uma uchwepheshe imisiwe emsebenzini ngenxa yokwephula, inikeza isitifiketi engavamile welders enhlanganweni kuyo umqashi bayakwazi ukubamba iqhaza ngaye.
Ukuqinisekisa ngamathuluzi nangezinto zokwakha
Ngaphandle isitifiketi oqondile ongoti, odokotela kanye olufanele kokuhlola imishini Welding, ubuchwepheshe kanye nemisebenzi. Endabeni amadivayisi ngaphansi kokulawulwa ephakamisa futhi ezokuthutha imishini, igesi Imishini, Metallurgical kanye uwoyela negesi Logistics, kanjalo nezakhiwo ezehlukene. Kusemqoka futhi isitifiketi yezindawo tekusebenta UWelder, lapho izimo zokusebenza ziyahlolwa ngokuya isikhulu sezokuphepha. Ngo imisebenzi isitifiketi eziyinkimbinkimbi ukusiza ukuthuthukisa ikhwalithi zokushisela futhi ukunciphisa izindleko zayo zokuphepha.
Certification futhi unikeza omningi izinzuzo bona welders. Isitifiketi lokuqala kuqinisekisa okusezingeni eliphezulu ezingeni professional ongoti, ukwandisa amakhono ayo ekukhuleni umsebenzi. Njengoba umkhuba ubonisa, iholo lezi zisebenzi cishe kabili ngesilinganiso abasebenzi imfundamakhwela kwale mboni. Ngesikhathi esifanayo, izitifiketi welders NAKS kungase kubhekwe njengokwelapha uhlobo umphakathi self-elawula. Okungukuthi, uchwepheshe uthola amalungelo athile. Lokhu kusebenza akuzona kuphela isicelo somsebenzi, kodwa futhi ukufinyelela ukuba imishini yamuva, okuvumela ukuba ukuxazulula izinselele ezikhethekile kakhulu. Ngakho-ke, welders abanolwazi batusa ukuthi kwalabo abaye bakhetha ukwenza lo msebenzi, ngokushesha ngangokunokwenzeka ukukhipha NAKS bese uqhubeke ukuthuthukiswa kwamakhono professional ezingeni eliphakeme.
Uba kanjani i-IT-guru, ngaphandle kokushiya ikhaya
Umsebenzi ongajwayelekile. Usher - kuba umqaphi ethempelini yobuciko
Ukusebenza "uzibuthe": accomodation
Uba kanjani umqondisi: amakhono adingekayo
Okukhethekile "Management yenhlangano": Ubani Ngisebenza?
Vladislav Surkov - Assistant uMongameli. Surkov Vladislav Yurevich: Biography, umsebenzi
Repost and Reposition - kuyini?
"Nokia 515": izibuyekezo, izithombe, intengo kanye nezici
Ihhotela 3 * Induruwa Beach Resort Indawo abantu, Sri Lanka: izibuyekezo, izithombe
Pasteurellosis unogwaja (septicemia oluhambisana): izindlela zokutheleleka, izimpawu, ukwelashwa, zokuvimbela